Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “လာခြင်းကောင်းတဲ့ Hacking” ♫
♪ “လာခြင်းကောင်းတဲ့ Hacking” ♫
ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလိုပဲ hacking ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကလည်း တစ်ချိန်က လိုဆွဲပြီး ပုံဖျက်တာခံခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် hacking ဆိုတာ အဖျက်လုပ်ရပ်၊ hacker ဆိုတာ လူဆိုးဆိုပြီး လူအများစု စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတယ်။ တကယ်တော့ hacking ဆိုတာ ပညာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ်တတ်မြောက် တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါတယ်။ အခုတင်ပြမယ့် ဆောင်းပါးကလည်း အွန်လိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့သုံးနေကျ Website တွေကို သုံးလို့ပိုကောင်းအောင် နည်းပညာနဲ့ ပြုပြင်ယူမယ့် အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လာခြင်းကောင်း တဲ့ hacking လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။Website တွေက သူ့ထက်ငါ ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆိုတဲ့ website တွေတောင် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ အစိတ်အပိုင်းတွေရှိနေတတ်ပါ တယ်။ Page loading သိပ်နှေးတာမျိုးတွေ၊ အရောင်ကြောင်တဲ့ အတွက် စာသားဖတ်ရခက်တာမျိုးတွေ၊ ကြော်ငြာတွေက webpage ရဲ့ အဓိကအစိတ် အပိုင်းကို ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးတွေ၊ option ကို ရှာရခက်တာမျိုးတွေ စသည် စသည်ဖြင့် အများကြီး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကံကောင်းတာ Webpage တွေရဲ့ ပြဿနာတွေကို ပြုပြင်ပေးပြီး ကိုယ့် စိတ်တိုင်းကျ အနေအထားနဲ့ ကြည့်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် free tool တွေရှိနေတာပါ။ သူတို့က လှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ website ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ စက်ပေါ်တင်ရတာကလည်း browser extension install လုပ်ရသလောက် လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ hacking ကိုလည်း ကလစ် တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ YouTube ကို hack လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ YouTube ဟာ ဒီနေ့ဆိုရင် ဖျော်ဖြေရေးသက်သက်မဟုတ် တော့ဘဲ ပညာသင်ကြားရေး၊ ဗဟုသုတရှာဖွေရေးအတွက် သိပ်ပြီးအသုံးတည့် လာပါတယ်။
YouTube ကိုကြည့်ရတဲ့ အရသာ ပိုကောင်းလာအောင် အရည် အသွေးမြှင့်ပါမယ်။ အဲဒီကိစ္စအတွက် Magic actions for YouTube app ကို install လုပ်ပါမယ်။ အဲဒီ app ကို (www.chromeactions.com) ကနေ download ချပါမယ်။ သူ့ထဲမှာ YouTube ကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အပိုဆောင်း ရွေးချယ်ခွင့်တွေ တစ်ပုံကြီး ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ app ကို chrome ၊ Firefox နဲ့ Opera တွေအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ အံ့အား သင့်ရလောက်အောင် ကောင်းတဲ့ ဒီ app က ကြော်ငြာနဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ပိတ်ဆို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်မကြည့်ချင်တဲ့ page element တွေကို ဖျောက်ထားနိုင်တယ်။ အဲဒီထဲမှာ comments တွေ ပါတယ်။ ဆက်စပ် ဗီဒီယို တွေနဲ့ အဲဒီဗီဒီယိုအကြောင်း ရှင်းပြချက်တွေ ပါပါတယ်။ နောက်ပြီး YouTube ပေါ်က ဗီဒီယိုတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Size နဲ့ resolution အတိုင်း ပြစေနိုင် ပါတယ်။
Mouse ထဲက scroll wheel ကိုသုံးပြီး volume control လုပ်နိုင်စေ ပါတယ်။ သူ့ကြောင့် screen capture လုပ်နိုင်မယ်။ တခြားလုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ Cinema mode ကတော့ အတော်လေး သဘောကျစရာကောင်းပါ တယ်။ Screen ပေါ်မှာ player ရဲ့ ပြကွက်နေရာ လောက်ကိုပဲ အလင်းပေးပြီး ကျန်တဲ့နေရာတွေကို အမှောင်ချဖို့ ခလုတ်တစ် ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ပြီးပါတယ်။ Installation လုပ်နေတုန်းမှာထောက်ခံထားတဲ့ extra tool တွေ အားလုံးကို install မလုပ်ဖို့တော့ သတိထား ရပါမယ်။
ဒုတိယ hack မယ့်နေရာက Wikipedia ပါ။ သူ့ထဲမှာ အပိုဆောင်း options တွေ ထပ်ထည့်ပါမယ်။
လက်ခံ ကြိုဆိုဖို့ကောင်းတဲ့ အပိုဆောင်းစွမ်းရည် တွေကို အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းကြီးထဲမှာ ထည့်နိုင်ဖို့ Wikipedia Plus on Chrome ကို install လုပ်ပါမယ်။ သူ့ကို www.bit.ly/wikiplus402 ကနေ download ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီ extension ကို install လုပ်ပြီးသွားရင် link တစ်ခု အပေါ် mouse ဖြတ်တင်လိုက်တဲ့အခါ တခြားသော wikipedia entry တွေကို စာသားအပိုင်းတိုလေးတွေ နဲ့ ပြပေးပါမယ်။ section title တွေကို in page link တွေအဖြစ် ပြောင်းပြီး ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ဒါကြောင့် book marking နဲ့ sharing အလုပ်ကို ပိုပြီး လွယ်ကူစေပါတယ်။ image တစ်ခုအပေါ် mouse ဖြတ်တင် လိုက်ရင် ပိုကြီးတဲ့ image ကို အလွယ်တကူ ကြည့်ခွင့်ရစေပါတယ်။
နောက်ထပ်စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ extension တစ်ခုက Black Menu for Wikipedia ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို www. bit.ly/blackmenu 402 ကနေ download ဆွဲချနိုင် ပါတယ်။ သူ့ကို install လုပ်လိုက်ရင် webpage ပေါ်မှာ sidebar တစ်ခု ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်။ အဲဒီ sidebar ကနေ တခြားသော Wikimedia foundation project တွေဆီသွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကပိုပြီး ထူးခြားလို့လား။ ထူးခြားပါတယ်။ Wikimedia Foundation Project တွေထဲမှာ Wikitionary ၊ Wikiquoto နဲ့ Wikibooks တွေ ပါပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ စမ်းကြည့်မှာက facebook ပါ။ face ကို ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်ရှိ အောင် ပြုပြင်ကြည့်ကြပါမယ်။ facebook ဟာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ အတော်ကြီး စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ပြုပြင်မှာပါ။ ဒီကိစ္စအတွက် social fixer ကိုသုံးပါ မယ်။ ဒီ app ကို www.social fixer.com ကနေ download ချနိုင် ပါတယ်။ သူက Facebook website အတွက် အပိုဆောင်း options တွေ ထည့်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်အောင် ကူညီပါတယ်။ဒီ extension ကို chrome ၊ firefox ၊ Opera နဲ့ Safari browser တွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ သူက newsfeed တွေမှာ လိုတာ ကြည့်ပြီး မလိုတာမကြည့်ရအောင် filter လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖတ်ပြီးသား post တွေကို ဖျောက်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံငယ်လေးတွေပေါ်မှာ mouse ဖြတ်ပြီး တင်လိုက်ရင် ပုံရိပ်အရွယ်အစား ပြည့်ကိုပြပေးပါတယ်။ Webpage ရဲ့ တချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖျောက်ပေးနိုင်သလို Theme အပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်စေပါတယ်။ တခြားလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်း ဆောင်ရည်တွေ လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကံမကောင်းတာက အခုအချိန်မှာ ဒီ extension ကို update မလုပ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် browser အသစ်တွေမှာ တချို့သော စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။
နောက်ဆုံး hack ကြည့်မယ့်နေရာက Gmail ဖြစ်ပါတယ်။ Gmail labs ဟာ စမ်းသပ်ဆဲ စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို Gmail Service ထဲမှာ ထည့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Gmail Lab ကို update မလုပ်တာ အတော်ကြာပါပြီ။ Gmail Lab ရဲ့ စွမ်းဆောင် ချက်စာရင်းကို ကြည့်ဖို့နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်ရာ စွမ်းဆောင်ချက်ကို enable လုပ်ဖို့ Gmail ကို အရင်ဖွင့်ပါမယ်။ ပြီးရင် Setting ထဲဝင်ပြီး Labs ဆိုတဲ့ tab ကို ကလစ်နှိပ်ပါမယ်။ Highlight လုပ်ပြထားတဲ့ဟာတွေထဲမှာ preview pane နဲ့ canned Responses တွေ ပါပါတယ်။
Preview pane ဟာ message content တွေကို inbox ရဲ့ ညာဘက်မှာပြပေးနိုင်ပါတယ်။ Canned Response ကတော့ သုံးလေ့သုံးထရှိတဲ့ ပုံသေပြန်စာတွေကို ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ ယူသုံးနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာရိုက်ရသက်သာ စေပါတယ်။
Canned Response ထဲမှာ လိုချင်တာရွေးပြီးရင် အောက်ဘက်ကို ဆင်းပြီး Save changes ကို ခလုတ်နှိပ်ရုံနဲ့ စပြီး အသက်ဝင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Add-on တွေထဲမှာ တစ်ခုဟာ Boomerang ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို www. boomerang ကနေ download ချပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ Firefox ၊ chrome နဲ့ Safari တွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ သူက message တွေကို သတ်မှတ်ရက်မှာ ပို့နိုင်အောင် ပြန်စာတွေကို သတ်မှတ်ရက်မှာ ပို့နိုင်အောင် အထောက်အကူ ပေးပါတယ်။ reminder schedule ဆွဲထားနိုင်သလို message tracking လည်း လုပ်နိုင်စေပါတယ်။